Washington DC Capitol Hill yakabviswa mushure me'kushanda kwebhomba kutyisidzira '
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » mhosva » Washington DC Capitol Hill yakabviswa mushure me'kushanda kwebhomba kutyisidzira '
Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • mhosva • Hurumende Nhau • nhau • vanhu • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Mumwe murume mutiraki dema rekusimudza akachaira akananga kuRaibhurari yeCongress chivakwa uye akataura kuti aive nechinhu chinoputika mumotokari, asati aratidzira chaitaridzika kunge detonator.
Chenjedzo yekuchengetedza yakasimudzwa nhasi paCapital Hill.
Mapurisa akaburitsa nzvimbo yakatenderedza Raibhurari yeCongress.
Mapurisa anga achipindura mota inofungira padhuze neLibhurari yeCongress.
NeChina, chenjedzo yekuchengetedzwa yakamutswa paCapitol Hill muWashington, DC sezvo vashandi vakaudzwa kuti vabve muzvivakwa nemishumo yakabuda kuti mapurisa ari kuongorora chingangoitika chinoputika mutiraki.
Mapurisa eU.S. Capitol akaburitsa nzvimbo yakatenderedza Library yeCongress paCapitol Hill mushure mekunge mutyairi amira panze ndokuti aive nebhomba mumotokari yake yekutakura, mukuru wemapurisa akadaro.
Mune tweet, US Capitol Mapurisa vakati ivo "vari kupindura mota inofungidzirwa padyo neLibhurari yeCongress" uye vakurudzira vanhu kuti vagare kure nenzvimbo iyi.
Mukuru wemapurisa Tom Manger akaudza vatori venhau padhuze nepano kuti na9: 15 mangwanani nguva yemurume murume aive mutiraki dema akasimudza akananga kuchivakwa cheLibhurari yeCongress mu Washington, DC ndokuzviti ane chinhu chinoputika mumotokari, asati aratidzira chaitaridzika kunge chishoma. Nhaurirano dzakaitwa dzichienderera mberi nemutyairi kuti awane "gadziriso ine runyararo", akadaro Manger.
"Hatizive zvinangwa zvake panguva ino," mukuru wemapurisa akawedzera.
Pakutanga, chifananidzo chisina kuburitswa chakatorwa kunze kweRaibhurari yeCongress chakaonekwa kuratidza mutyairi achiri mumotokari, nemabhiri emadhora akapararira pasi kunze kwetiraki.
Anofungidzirwa anonzi akatumirawo livestream yainge yabviswa pari zvino agere kuseri kwechigaro chekutyaira mukati memotokari yakamiswa, maakataura kumutungamiri weUS Joe Biden achiti ane mabhomba akati wandei. Chikamu chemavhidhiyo chakaonekwa kuratidza chaitaridzika kunge tangi regasi, zvinoputika zvepurasitiki uye akati wandei matabhu makuru ekuchinja kwakasununguka murori. Vati zvinoputika murori zvakabirirwa kuti zvinyurwe neruzha rwakakwana, senge fafitera remotokari rakaputswa nekurira kwepfuti.
Murume uyu akataura zvakare kuti kwaive nezvimwe zvina zvinoputika munzvimbo dzisingazivikanwe, achiti vamwe vakavatakura zvakasiyana.
Facebook yakazokiya account yemushandisi anonzi Ray Roseberry mushure memaminitsi makumi matatu livestream.
Vhidhiyo yakagovaniswa pamhepo yakaratidza huwandu hwemotokari dzinoteedzera mutemo, kusanganisira akasarudzika matraki eEmergency Response Team, akananga munzvimbo yakatemerwa. Mumavhidhiyo eTV, mapurisa akaonekwa achivhara nzvimbo iyi, nezvipingamupinyi zvakasimudzwa kudzivirira kupinda.
Zvinoenderana neazvino mapurisa eUS Capitol mapurisa, mupomeri uyu azvipira kumapurisa.
Corona Negatives Party ine Corona Positives uye Ida Mhedzisiro
Iyo Boomerang Nzira yeKurega Kukuru
ER Vanachiremba Vanotsanangura Iyo Yakanakisa Omicron Dziviriro
10-Maminiti Kudya: Yekutanga Yerudzi rwayo
Kutanga Munyika: 100% Battery Powered Container Ship
Nyowani COVID-19 Yekuvandudza: FDA Inobvumidza Nyowani-Yakareba Inobata Monoclonal Antibodies
Wina Inoshamisa Glamping Zororo Mwaka uno weHorodhe
Childhood Asthma: Kurapwa Kutsva Kunoderedza Zvinonyanya Kurwiswa NeAsma
Kuenda kune dzimwe nyika ndiyo Kiyi yeKukura Kwenguva refu US Economic Growth